Dhageyso :-Wasiirkii hore ee amniga Somaliya“Dowladda Soomaaliya Malahan siyaasad ku wajahan arimaha dibadda ” - Awdinle Online
Dhageyso :-Wasiirkii hore ee amniga Somaliya“Dowladda Soomaaliya Malahan siyaasad ku wajahan arimaha dibadda ”
March 2, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa waxaa uu ka hadlay eedeyntii dhawaan dowladda Soomaaliya u jeedisay dowladda Kenya.
Waxaa uu sheegay Xildhibaan C/risaaq in iyada dowladda Soomaaliya ka cabaneyso in faragelin siyaasadeed ay Kenya ku wado Arrimaha Gudaha ayaa waxaa uu xusay in Muqdisho Safar qarsoodi ah ay ku yimideen Xildhibaano ka socda Kenya, kuwaasi oo dowladooda aysan ka warqabin, isla markaana la kulmay Madax ka tirsan dowladda.
Xildhibaanka ayaa waxaa uu sheegay in Safarka Muqdisho ay ku yimideen Xildhibaanada ay Kenya siineyso fursad ah inay tiraado dowladda Soomaaliya ayaa faragelin ku wada Kenya, ayna labada dowladood nodaan kuwo dagaal uu ka dhexeeyo.
”Haddii shalay dowladda Soomaaliya ay ka cabanaysay in Kenya faragalin ay ku heyso maantana la leeyahay xildhibaanno Kenyaan ah oo dowladoodu ka warqabin ayaa kulan qarsoodi ah Muqdisho Taliyaha NISA kula qaatay taasi waxay Kenya Fursad u siineysaa inay dhahdo dowladda Soomaaliya ayaa faragalin igu haysa arintiina ay noqoto dowlado daris ah oo dagaal ka dhexeeyo” ayuu yir Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in aysan laheyn siyaasad ku wajahan arimaha dibadda iyo sida loola macaamilo dadka, sidoo kalena waxaa uu xusay in la-taliyayaasha Madaxweyne Farmaajo wacyigoodu uusan gaarsiisneyn sida uu adduunku u shaqeeyo.
”Waxaad mooddaa Dowladda Soomaaliya ee Villa Soomaaliya Fadhisa inaysan lahayn siyaasad ku wajahan arimaha dibadda iyo sida loola macaamilo ama dadka la-taliyayaasha Madaxweyne Farmaajo iyagana ma gaarsiisana wacyigoodu adduunku siduu u shaqeeyo”. Ayuu sii raaciyay hadalkiisa
Hadalka Xildhibaanka ayaa waxaa kusoo aadayaa, iyadoo maalin kahor Muqdisho ay safar qarsoodi ah ay ku yimideen Xildhibaano Soomaali Kenyan, iyagoona la sheegay inay kulan qaateen Taliyaha Hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA.
Previous articleC/raxmaan C/Shakuur “Ciidamadii looga talo galay la-dagaalanka Al-Shabaab waxaa loo weeciyo dhinaca dowlad Goboleedyada.”
Next articleXildhibaan Xuseen Carab Ciise oo iska-casilay Xisbiga Himilo